Foreign Bodies in Eye ( May, 2022 ) - Ministry of Health (MOH) Myanmar
Foreign Bodies in Eye ( May, 2022 )
မျက်စိထဲ အမှုန်၀င်ခြင်း သို့ အရာ၀တ္ထု၀င်ခြင်း ( May, 2022 )
“မျက်စိထဲ ဖုန်၀င်သွားလို့” “မျက်စိထဲခဲချွန်၀င်သွားလို့” “ရန်ဖြစ်ရင်း သူငယ်ချင်းက မျက်လုံးကို ခဲတံနဲ့ထိုးလိုက်လို့” စတဲ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက မစိမ်းတဲ့ကြားနေကျစကားများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်နဲ့ အရေးပေါ်ပြုလုပ်ပေးစရာလေးတွေကို ဆွေးနွေးပြောပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်စိထဲကတော့ ပေါင်းစုံ၀င်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်၊သံစ၊ သစ်စ၊ မှန်စ အမှုန်ကနေအစ မျိုးစုံ ၀င်နိုင်ပါတယ်။
မျက်စိထဲ ၀င်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဝင်တဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီး အရေးကြီးမှုနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ်တွေ ကွာပါတယ်။
(၁) မျက်ဆံ (မျက်စိရဲ့ အမည်းဝိုင်း) ပေါ်ကပ်တွယ်ခြင်း (corneal foreign body)
(၂) ဘေးက မျက်သားအဖြူပေါ် ကပ်နေခြင်း အထူးသဖြင့် (အပေါ်/အောက်)မျက်ခွံအောက်တွင်းကပ်နေခြင်း (conjunctival foreign body)
(၃) မျက်စိအတွင်းသို့ စိုက်၀င်ခြင်း (intraocular foreign body) ဒါကတော့ အရေးအကြီးဆုံး အမျိုးအစားပါပဲ။ တစ်ခါတရံ သတိထားမကြည့်ရင် လွတ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံ သံသယရှိပါရင် ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်မှ သိနိုင်ပါတယ်။ သတိမထားမိရင် အမြင်အာရုံ ပျောက်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နံပါတ်(၁) အမျိုးအစားကလည်း ပေါ့ဆလို့မရပါ။ မျက်ဆံ (cornea) ပေါ်မှာ သံစကပ်တွယ်နေရင် သံချေးတက်ပြီး အမည်းစက်ပေါ်ကာ နောင်တစ်ချိန်ကျ အမာရွတ်ဖြစ်ပြီး ၊ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းမှာ ထိုနေရာကွက်၍ မမြင်နိုင်တော့ပါ။
– ပိုး၀င်ခြင်းကလည်း ပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မသန့်သော မျက်စဉ်းများမခပ်ရပါ။
မျက်စိထဲ ၀င်/မ၀င် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
အဓိကကတော့ မျက်စိအောင့်မယ်၊ နေလို့မကောင်းဘူး ခိုးလို့ခုလုဖြစ်မယ်။ မျက်ရည်တွေထွက်လာမယ်။ အမြင်ဝါးလာမယ်။ မျက်သားအဖြူနေရာတွေ ရဲလာမယ်။ အလင်းရောင်ကို မခံနိုင်ဘူး စတာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာတွေဟာ မျက်စိထဲ ၀င်၀င်ချင်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ ၀င်ပြီး ၈နာရီလောက်ကြာမှလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေ ခံစားရပြီဆိုရင် မျက်စိထဲ တစ်ခုခု၀င်သွားလောက်တယ်လို့ သတိထားမိသင့်ပါတယ်။
တစ်ခါတရံ မျက်လုံးအိမ်ထဲ ၀င်သွားပေမယ့်လည်း အစောပိုင်းမှာ သိပ်မခံစားရပါဘူး။ ဒါကို မပေါ့သင့်ပါဘူး။ သံသယရှိရင် ဆရာ၀န်နဲ့ပြပြီး တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဒါဆို မျက်စိထဲ တစ်ခုခု၀င်သွားရင် ဘာလုပ်ရမလဲ
၀င်ပြီဆိုတာနဲ့ ဆရာ၀န်ဆီ ချက်ချင်းသွားပါ။ စောစောသွားလို့ ၀င်နေတဲ့အစ(သံစ)ကို စောစောဖယ်ရင် သံချေးတက်ဖို့ အခွင့်အရေးနည်းပါမယ်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ၀င်တာလေးတွေအတွက် ဆရာ၀န်တွေ လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေး တင်ပြလိုပါတယ်။
– အရင်ဆုံးတော့ အမြင်အာရုံကို ထိမထိ စစ်ရပါမယ်။
– ပြီးရင် မျက်ဆံ၊ မျက်သား၊ မျက်ခွံ အစရှိသဖြင့် မျက်လုံးကို စစ်ဆေးရပါမယ်။ အပေါ်ယံ၀င်တဲ့ ပစ္စည်း ရှိရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
– တစ်ခါတရံ ကိုယ်က တစ်ခုခုရှိနေသေးသလို ခံစားရပေမယ့် ၀င်နေတဲ့ပစ္စည်း မရှိတော့တာ ၊ ထွက်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
– တကယ်လို့ ၀င်နေတဲ့အရာကို တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ မျက်စိဟာ နာလွယ်တာမို့ ထုံဆေးမျက်စဉ်း အရင်ခပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါမှသာ ပစ္စည်းဖယ်တဲ့အချိန် အဆင်ပြေမှာပါ။
– တစ်ခါတရံ ၀င်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးကို ဂွမ်းစနဲ့ ဖယ်လို့ရနိုင်သလို၊ မျက်ဆံမှာ ကပ်နေရင် အပ်ထိပ်ချွန်ကလေးနဲ့ အသာလေး ဖယ်လို့ရပါတယ်။ လက်ငြိမ်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။ လူနာ ငြိမ်ဖို့လည်း လိုပါမယ်။
ဖယ်ပြီးရင် ပြီးပြီလား? ဘာဆက်ဂရုစိုက်ရအုံးမလဲ
ဖယ်ပြီးရင်တော့ ဆရာ၀န်ညွှန်ကြားတဲ့ မျက်စဉ်းခပ်ပေးရပါတယ်။
ထုံ‌‌ဆေးပြေရင် အနာသက်သာဖို့တော့ ပါရာစီတမောလောက် သောက်လို့ရပါတယ်။
ဒီလိုဖယ်တာကတော့ အများအားဖြင့် မျက်သားနဲ့မျက်ဆံမှာ ကပ်တဲ့အရာတွေအတွက်အဓိကပါ။ အဲ့ထဲမှာမှ မျက်ဆံ (အမည်းဝိုင်း) မှာကပ်တဲ့အရာကို ဖယ်ထားပြီးရင် မျက်လုံးကို အအုပ်ကလေး (သို့) ပတ်တီးစနဲ့ အုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့အအုပ်ကို မခွာရပါဘူး။ အဲတာ အရေးကြီးပါတယ်။
ပစ္စည်းစိုက်ဝင်လို့ဖြစ်တဲ့ မျက်ဆံက အပေါက်သေးလေး ကျက်ဖို့အတွက် အဲဒီ့မျက်စိကို အနား‌ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့အပေါက်ကလေး ကျက်ဖို့ကအနည်းဆုံး (၄၈)နာရီလောက်ကြာပါတယ်။
အဲလိုမျက်စိအအုပ်နဲ့ ကားမမောင်းသင့်ပါဘူး။ ပြီးရင်တော့ ဆရာ၀န်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ရက်ချိန်းပုံမှန် ပြန်ပြပေးပါဖို့ လိုပါတယ်။
မျက်စိဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါမျိုးတွေ မဖြစ်ခင်ကတည်းက ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိရင်မျက်စိကို cover တပ်ပြီး အလုပ်လုပ်ပါ။ သံတိုသံစတွေဖြတ်တောက်နေတဲ့ နေရာလိုမျိုး အမှုန်တွေလွင့်နိုင်တဲ့နေရာတွေအနား မလိုပဲ မသွားပါနဲ့။ သွားချင်ရင် မျက်လုံးကို အကာအကွယ်တပ်ပြီးမှသွားပါ။ လေတအားတိုက်နေရင် မျက်လုံးကို မျက်မှန် သို့ အကာအကွယ်တပ်သွားပါ။ ဒီလိုအလွယ်တကူ ကာကွယ်လို့ရတာလေးတွေကို သတိထားလိုက်ခြင်းဖြင့် အမြင်အာရုံကို တန်ဖိုးထားကြပါစို့။
Murtagh,J , 2016. Murtagh’s patient education. 6th Ed. Australia:Mcgraw-Hill Australia,pp.171.